NK | देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका सांसदहरु सर्वोच्च जादै
काठमाडौं । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको कदमविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छ । शनिबार अपरान्ह नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच […]
हरेक बयस्क मानिसमा यौन चाहना हुनु स्वभाविक हो । सामान्यत महिलाहरु पूरुषको दाँजोमा यौंन सम्पर्कको चाहना भएपनि व्यक्त गर्न सक्दैनन् अथवा व्यक्त गर्न लजाउँछन् । यसर्थ यहाँ महिलाहरुमा यौन चाहना भएको कसरी थाहा पाउने भन्ने विषयमा सामान्य चर्चा गरिन्छ । […]
अधिकांस मानिसको मनमा कति पटकसम्म यौन सम्बन्ध राख्न मिल्छ ? धेरै पटक यौन सम्पर्क गरे के कस्तो असर गर्ला ? आदी प्रश्न उठ्ने गर्छ । जुन स्वभाविक पनि हो । यो सामान्यतया सोधिने प्रश्न होईन तर उमेर पुगेका व्यक्तिहरुले जान्न […]
दुई आत्मको मिलन हो, वैवाहिक जीवन । यो एक मजबुत सम्बन्ध पनि हो । एकाअर्कालाई बिश्वास गरिएको अवस्थामा जीवन सुमधुर बन्न पुग्छ । दुई आत्माको मिलन संगै सयौं नाता, साइनो समेत सामेल भएका हुन्छन् । पुरुषलाई महिलाको आवश्यकता पर्दछ । […]
काठमाडौं :- हजुरका हरेक पाइलामा साथ हजुरको उन्नतिले दिओस अन्टि गगन चुम्ने खुशी अनी फूल फुल्ने हासोले दिओस काँडा आँफै पन्छिदिओस आशु आँफै सुकिदिओस भाग्य सधैं सधैं भरी हजुरको घरको पाहुना बनोस सुर्यका ति उषाहरुले हजुरको बिहानि सजाइदिओस त्यो पवित्र […]
अबिसेक डाँगी/काठमाडौं :- प्रेम दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे प्रेम जोडीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण दिन मानिन्छ । जोडी खोज्दै गरेका तथा प्रेम प्रस्ताव राख्ने मनसाय बनाएकाहरूका लागि पनि प्रणय दिवस उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । विशेष गरी यो १४ फेब्रुअरीका दिन यो दिवस […]
पार्टनरको यौन चाहना कसरी थाहा पाउने ?
काठमाडौं :- यौन क्रियाकलापलाई सुमधुर वनाउन गरिने कुनैपनि पूर्व क्रियाकलाप जस्तै रमाइलो वातावरणमा गरिने भोजन, प्रेमवार्ता, सृंगाररसयुक्त ठट्टालाई पनि पाकक्रिडा भनिन्छ । सम्भोग सुरु गर्नु अघि यौन उत्तेजना बढाउन गरिने विभिन्न यौन क्रियाकलाप पाकक्रिडा (फोर प्ले) गर्ने गर्नुपर्छ । तर […]
हाम्रो समाजमा आजभोली हामीले दिनहु बलात्कारका घटनाहरु घटिरहेको समाचारहरु सुनिरहेका छौ । नेपाली चेलीहरु बलात्कारको सिकार भैरहेका खबर पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । बलात्कारीहरु ले अनेकौ जल झेल गरेर कयौ चेलीहरुलाई बिचल्ली समेत पारेका छन् । बलात्कारी भनेका शिकार […]
अविवाहित भन्दा विवाहित युवतीतर्फ आकर्षित किन हुन्छन् पुरुष
काठमाडौं :- आजकल यस्ता कयौं उदाहारणहरु सुन्न र देख्न पाइन्छ । जहाँ धेरै युवा विवाहित महिलातर्फ आकर्षित हुने गरेका छन् । हालसालै भएको एक अनुसन्धानका अनुसार यो तथ्यलाई पनि पुष्टि गरेको छ । शोधमा यसको पछिको कारण पनि बताइएको छ […]
काठमाडौं :- जब टीका लगाइदिइसकेपछि आशीर्वाद दिन उठेका माइलाबाका हात उनको शिर छोएर गाला मुसार्दै उनकै छातिको बाटो तल झर्छन अनि उनलाई लाग्छ अपराधी माइलाबा होइनन , अपराधी त यी चाडपर्व हुन जो हरेकसाल नबिराइ आउने गर्दछन । जब स्कुलमा […]